Enterprise Zvemagariro Kukurukurirana uye Kubatana Mapuratifomu
Pamhepo eprojeki manejimendi manejimendi akashanduka kuita mapuratifomu ehukama, kusanganisira zviitiko zvezviitiko, mabasa, kuronga, manejimendi manejimendi uye kubatanidzwa kune ekunze masisitimu. Iyi indasitiri iri kufambira mberi nekukurumidza uye kune vakawanda vatambi muindastiri. Takaedza kutsvaga vatambi vepamusoro mu bhizinesi rekutaurirana munharaunda musika pano!
Azendoo - Ronga, ronga, shandira pamwe uye uteedzere basa rechikwata chako kubva kunzvimbo imwechete.
Bizzmine - Flexible workflow platform yekurerutsa bhizinesi rako maitiro.
Bloomfire - Bloomfire's ruzivo rwekubatanidzwa papuratifomu inopa nhengo dzechikwata simba rekutora mukati-uye kubatsira kune- rako rakabatana ungwaru.
Brightpod ndiyo yakapusa purojekiti yekudyidzana software iyo yako yekushambadzira timu yaunoshandisa kunzwa kudzikama, yakatarisana uye mukutonga. Inovimbwa nemakambani anodarika mazana mana nemakumi mana nesere.
Chanty - yakapusa AI-powered timu yekutaura. Wana yakachengeteka mameseji vakasununguka zvachose.
Cisco Webex Matimu - ese matimu ekubatana maturusi aunoda kuti uchengetedze basa kuenda kumberi uye unobatana nemamwe maturusi aunoshandisa kurerutsa hupenyu.
Clinked - Nunura vatengi vako & zvikwata zvakatarisana nevatengi kubata kwakachengeteka kwechena-chitupa chakashambadzirwa chikuva & nharembozha nhasi.
Kurara - Kubatanidza mameseji nefaira kugovana uye mabasa, Kurara kune zvese zvaunoda kuronga basa reboka rako kubva pane zano kuenda pakuitwa.
Boka - Boka rinoita kuti kutaurirana pamwe nekushandira pamwe kuve nyore
Flowdock - dzese hurukuro dzako, zvinhu zvekushanda uye maturusi munzvimbo imwechete. Koshesa basa, gadzirisa matambudziko, tsvaga uye kuronga mukati mezvikwata, nzvimbo nenzvimbo dzenguva.
Jive - Mukati memakambani, iyo Jive chikuva inopa masimba ehutachiona bhizinesi pasocial network uko vashandi vanobatana uye vanobatana.
JoinCube - All-in-one yekushandisa turu, yakapusa uye inonzwisisika.
MangoApps zvese-mu-mumwe mushandi kutaurirana & kubatirana chikuva.
Zvikuru - Enterprise timu kubatana pamwe nekutumira mameseji ayo anoshandisa pane-fungidziro kana kudzikisira zvigadzirwa pasi peIT kudzora
Microsoft Team - Chat, sangana, kufona, uye kushandira pamwe, zvese munzvimbo imwechete.
Microsoft Yammer - Batana nevanhu pasangano rako kuti uite sarudzo dzakanaka, nekukurumidza.
Muvhuro.com - chishandiso chekudyidzana chinokutendera kuti utarise kufambira mberi kwechikwata chako kuti ugare uchiziva panomira zvinhu.
Podium - customizable manejimendi manejimendi mhinduro iyo vatungamiriri vanovimba uye vashandi vanoda kushanda pairi.
Protonet - Iyo kwete. 1 mhinduro yekutaurirana pamwe nekubatana munzvimbo dzakachengeteka.
Rocket.chat - Chengetedza kutaurirana kwako, gadzirisa data rako uye uve neyako yekubatisa chishandiso yekuvandudza kugadzirwa kwechikwata.
Ryver - Chikwata chako chakabatana zvese mune imwechete app.
Salesforce Chatter - Goverana hunyanzvi, mafaera, uye dhata pane yako kambani pane Enterprise Social Network.
SAP KubudiriraFactors Human Experience Management (HXM) Suite - gadzira iyo mhando yevashandi kuita iyo inovandudza mhedzisiro yebhizinesi.
usimbe - Chengetedza hurukuro dzakarongeka muSlack, iyo smart nzira kune email.
Swabr - yekudyidzana yekutaurirana chikuva chemakambani
Kushandira pamwe - Kubatana pamwe ibasa uye manejimendi manejimendi manejimendi anobatsira zvikwata kuvandudza kubatana, kuoneka, kuzvidavirira uye pakupedzisira mhedzisiro
Tracky - Batanidza. Batira pamwe. Goverana.
Twist - Twist inopa timu yako nzvimbo yakarongeka yekukurukura mazano, kugovana zvigadziriso, uye kuvaka zivo iyo munhu wese anogona kunongedzera kumashure - kunyangwe makore anotevera.
waya - Yemazuva ano kubatana kunosangana neyakanyanya advanced chengetedzo uye yepamusoro mushandisi ruzivo.
Wrike ipuratifomu yepamhepo yekugadzira basa nekukurumidza, nyore, uye kugona mumapoka anowanikwa-pamwe uye akaparadzirwa.
Tags: azendoobizzminebloomfirekutauraclinkedchinokucollabspot mabhodhidiscuzzgrapheffecthalljivejoincubemangoappsmindjet kubatanidzaoogwavepodiumprotonetpulsechinyorwarefindersalesforcesalesforce chattersapsap vanobudiriramagariromagarirovabatiswabrwemusicyammer
Aug 27, 2012 na4: 28 PM
Ini ndinoda mikana asi dzimwe nguva zvinotyisa. Munhu anosarudza sei?
Aug 27, 2012 na5: 38 PM
Mhoro @ facebook-1097683082: disqus! Mazhinji emapuratifomu aya ane kusangana uye maficha asingawirirane. Zvakaoma kumakambani kutanga atenga software chikuva uyezve edza kugadzirisa yavo yemukati maitiro kuti igare nayo. Izvo zvinowanzo kutungamira mukundikana.
Isu tinokurudzira kunyora zvako zvemukati maitiro - kusanganisira zvisati zvaitika uye mushure mekuitika kwezvinhu, uye ipapo unogona kazhinji kuwana chikuva chinonyatsoenderana. Semuenzaniso, kana iwe ukashandisa email zvakanyanya… ipapo chikuva icho chinoverenga mhinduro dzeemail uye chinosundira zviziviso kunze kuburikidza neemail zvine muganho wekudzora zvinoshanda. Asi kana iwe ukashandisa Salesforce… saka ungangoda kushandisa imwe inosangana chaizvo. Ndinovimba inobatsira!
Aug 27, 2012 na10: 07 PM
Ndatenda! Tsvagiridzo inoenderera!
Ndatenda zvakanyanya nerondedzero Mamwe emazita ari matsva zvachose uye akatonyanya kukura sezvo ndine mukana wekuziva mudziyo mutsva. ndanga ndichishandisa Comindware task management system inova zvakare yakanaka mukutaurirana, manejimendi manejimendi.
Sep 6, 2012 na12: 55 PM
Wakawedzera Discuzz - iyo yandakangoverenga nezvayo paGeekwire. Zvinoita kunge Microsoft iri kutora kufarira mavari!
Yakawedzerwa! Ndatenda Julia!
Jul 17, 2013 na5: 08 PM
Jul 17, 2013 na6: 45 PM
Jul 18, 2013 na9: 33 PM
Wakawedzera, thanks @sahilparikh: disqus
Gumiguru 7, 2013 na1: 22 PM
Runyorwa rukuru. Clinked inowana vhoti yangu yezita rakaipisisa uye Jive yeiyo yakaipa vhidhiyo (kunyange iri ipuratifomu yakanaka).
Hai, Unoita sei
Wakanganwa nezve mapuratifomu emahara anozivikanwa - Bitrix24 naAsana